Jery todika ny 15 andro hamehana ara-pahasalamana farany sy ny manaraka - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tamin’ny 1 mey, dia 4211 ny an-dalam-pitsaboana, 636 no sitrana ary 332 no tranga misy fahasarotana. Tamin’ny 15 mey dia 1549 sisa ny an-dalam-pitsaboana, 150 no sitrana ary 290 no tranga misy fahasarotana. Ny fitambran’ny maty ny 23 marsa 2020 ka hatramin’ny 1 mey 2021 dia 666 raha 763 izany hatramin’ny 15 mey 2021, izany hoe manakaiky ny 100 tao anatin’ny tapa-bolana. Amin’ny ankapobeny, ny fitambaran’ny fitiliana na ‘test’ natao hatramin’izay niandohan’ny ady amin’ny valanaretina izay dia latsaky ny 200 000 ka maherin’ny 39 000 ny tranga hita fa mitondra ny tsimokaretina ary 37 000 mahery no sitrana. Mananika ny 90% ny taham-pahasitranana eto amintsika raha tombanana eo amin’ny 76% ny taham-pahasitranana eran-tany izay manakaiky ny 160 tapitrisa ny tranga ary 125 tapitrisa no sitrana. Tsikaritry ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana anefa fa mitombo ny lavo tamin’ity taona ity raha mitaha ny taon-dasa, Nalaky ny fahatongavana tamin’ny lavo maherin’ny 3,3 tapitrisa ankehitriny. Tahaka izay ihany koa ny fitombon’ny lavo eto Madagasikara. Enti-milaza izany fa mbola tsy vita ny ady amin’ity valanaretina ity na dia efa misy aza ireo firenena miala miandalana amin’ny maska sy ny fihibohana noho ny fahavitana vaksiny ampahany an-tapitrisa amin’ny mponina ao aminy.
Eo anatrehan’izany tontolo izany, ho antsika, mitohy 15 andro indray ny hamehana ara-pahasalamana sy ny fepetra samihafa miaraka amin’izany, araka ny nambaran’ny Praiminisitra Ntsay Christian ny alin’ny alahady 16 mey 2021, nanomboka tamin’ny 8 ora ka hatramin’ny 9 ora sy fahefany. Nanazava ny ataon’ny fitondram-panjakana izy io alina io amin’ny fiatrehana ny valanaretina sy ny fiainam-pirenena. Fanamafisana ny efa nambaran’ny filoham-pirenena ombieny ombieny no nataony, ary nilazany koa fa tsy miady izy sy ny filoha amin’ny hetsika rehetra atao.
Resaka vaksiny, “prime” ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana, “kere”
Tonga tamin’ny 8 mey 2021 ny andiany voalohany ao anatin’ilay programa ‘covax’ iarahana amin’ny mpiara-miombona antoka samihafa, miiisa 250 000 ‘doses’ amin’ilay atao hoe covishield na astrazeneca, ilay nanaovan’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina kiana tamin’ny tafany farany tamin’ny alalan’ny haino aman-jerim-panjakana TVM sy RNM. Ny tenany tamin’io fotoana io dia nitsidim-paritra tany atsimon’ny Nosy momba ny fanampiana amin’ny “kere” ary isan’ny nataony tany ihany koa ny fanolorana ny “prime exceptionnelle” ho an’ireo mpiasan’ny fahasalamana any an-toerana satria tsy tafita ny toromarika nampitainy. Taorian’izany, dia miandrandra io “prime” io ihany koa ny mpiasan’ny fahasalamana hafa rehetra izay tokony hisitraka izany toy ny ao amin’ny Faritra Analamanga izay anisan’ny be tranga indrindra amin’ity valanaretina ity.
Ity ady amin’ny “kere” ity araka ny tomban’ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny sakafo eto Madagasikara dia mihasarotra ary mila hatrany amin’ny 75 tapitrisa dolara hiatrehana azy. Olana tsy vaovao ny “kere” saingy mampametra-panontaniana mandraka ankehitriny ny tsy hafatanterahan’ny vahaolana mahomby iadiana aminy.
Fitaterana an’habakabaka misokatra ho an’ny sokajin’olona manokana
Araka ny fanapahan-kevitra tamin’ny filan-kevitry ny minisitra tamin’ny alarobia 12 mey dia nofaritana indray ireo sokajin’olona afaka mivezivezy eto Madagasikara amin’ny alalan’ny fitaterana an’habakabaka: ny masoivoho vahiny miasa sy monina eto amintsika, ireo iraky ny Fikambanana iraisam-pirenena sy ny mpiara-miasa ao aminy, ny manampahaizana manokana amin’ny sehatra indostrialy stratejika miara-miasa amin’ny fanjakana, ary ireo mpanao fanatanjahantena mandray anjara amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena.
Vavaka totoafo sy firaisan-kina, araka ny fanentanan’ny Papa Fransoa
Na dia mikatona aza ny Fiangonana noho ny hamehana ara-pahasalamana sy fihibohana ho an’ny faritra iharan’izany, dia manentana ny Papa Fransoa mba hanaovana vavaka totoafo iadiana amin’izao valanaretina ‘corona’ izao sy hampiharana ny firaisan-kinan’ny zanak’olombelona amin’ny ady atao. Ny Papa manokana dia mandrisika hatrany ny hisitrahan’ny firenen-dehetra, indrindra ireo firenena mahantra ny fitsaboana sahaza ary hatramin’ny fahazoana vaksiny aza.